Budata Live GIF maka Ios
Budata Live GIF
Free Budata maka Ios (15.00 MB)
Budata Live GIF,
Live GIF bụ ngwa na-enye gị ohere ịkekọrịta foto ndụ gị na iPhone 6s na 6s Plus gị dị ka .GIF ma ọ bụ vidiyo, ọ na-enyekwa nkwado 3D Touch.
Foto dị ndụ, nke nwekwara ike ịtọ dị ka akwụkwọ ahụaja, nwere ike ịkekọrịta site na iji iMessage, AirDrop ma ọ bụ ọrụ iCloud na enwere ike ịhụ ya na ngwaọrụ nwere iOS 9 sistemụ arụmọrụ. Enwere m ike ịsị na Live GIF bụ ngwa emebere iji wepu mmachi a.
Họrọ foto Live gị site na ngwa wee kesaa ha ngwa ngwa nụdị ọ bụla, ma ọ bụ na GIF ma ọ bụ usoro vidiyo. Enwere ike kesaa ya na Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, e-mail, nụdị ọ bụla ị nwere ike iche. Ebe foto dị ndụ ị na-ekerịta dị na usoro GIF / vidiyo, enwere ike ịlele ha na nyiwe gam akporo ekwentị na Windows.
Live GIF Ụdịdị
Mmepụta: Priime, Inc.